5 Amadolobha Ngaphansi ezicinene Ukuze Hlola EFrance | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba eFrance > 5 Amadolobha Ngaphansi ezicinene Ukuze Hlola EFrance
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 20/11/2020)
IFrance yayithandwa kakhulu izihambeli ze-hotspot sibonga nemizi yalo enhle kanye nezindawo bodumo. Izwe iphupho uya khona ezidumile emhlabeni wonke ngoba isiko laso ezithandekayo Ukudla okumnandi. Nakuba izivakashi eziningi zithuthelekela Paris, abanamabhizinisi edolobheni bangazithola ngokuvamile baba wawugcwala kakhulu kakhulu, ikakhulukazi ihlobo. Ngenhlanhla, France has ngakho kakhulu ukunikeza okungaphezu nje Paris futhi sibheka ezinhlanu imizi kancane eziminyene ngezansi.
Reims lingumuzi ne-Champagne kuyinto esifundeni iwayini futhi bobabili ngokuphelele langa. Iyisonto ezinye izivini kakhulu abaziwa emhlabeni nabahambi uqiniseka ukujabulela nomkhathi wawo ethulile. Uma fan champagne, ukhokha ukuvakashelwa uyisidingo. Isifunda Liyindawo enhle kodwa ingasaphathwa ophithizelayo ngaphezu komnotho wezwe. Nakuba eChampagne, qiniseka ukuthatha sela guided uhambo futhi ufunde kabanzi mayelana nendlela champagne senziwa.
Metz ukuze laseReims Izitimela
Luxembourg ukuze laseReims Izitimela
Lyon ukuba laseReims Izitimela
Lyon akuyona nje obunokuthula iholide uya khona kodwa futhi UNESCO Site ngenxa Amanxiwa alo adumile aseRoma futhi iminyuziyamu emangalisa. Uma Foodie, Lyon enye yezindawo best ukujabulela ezinye okumnandi kakhulu izibiliboco eFrance, nakuba qiniseka ukuthi ufune iseluleko mayelana ekuhlaleni uphilile ngenkathi kuzanywa ukudla entsha phesheya.
Wabathanda izakhiwo, ILyon nayo iyikhaya le- amasonto amaningana eRenaissance ukuthi uzothola kulo lonke idolobha.
ILondon eLyon Highspeed Izitimela
Uma unentshisekelo amakha, Grasse iyona uya khona ephelele. Uma uhlangabezane ethulile yayo, zikanokusho ezitaladini, uzithole ngilangazelela ukubuyela kaningi. Grasse kuyinto uya khona enhle esemgwaqweni French Riviera futhi, indlela engcono kakhulu ukuze zikhange abantu bakulezi bendawo nakhu ukuqhuba isiFulentshi sakho!!
Famous ngokuba idolobha lesibili ngobukhulu e-France, Marseille yidolobha sezulu umxhwele ugu. Lapha uzothola amanxiwa olubabazekayo emangalisayo art izikhungo ngikushiye ubungazwa amahora. Kulabo abafuna ukuphumula, Marseille iyikhaya amabhishi emangalisa lapho ungakwazi ukwohlamba ulwandle emnandi. Marseille inikeza wonke zombili njengoba ligcwele ezamasiko kanye izindawo serene ukuze uphumule.
Ibhekwa komunye wemizi eFrance Underrated kakhulu, Lille lingaphansi ophithizelayo kuka ezinye izindawo French ethandwa kakhudlwana, kodwa namanje enhle ngokulinganayo. izivakashi ungakwazi ukungcebeleka ngokusebenzisa imizila emazombezombe futhi ujabulele izakhiwo agqamile ophithizelayo Isibhakabhaka endleleni. Kubathandi art, le Palace of Fine Arts imnyuziyamu yindawo okumele ivakashelwe njengoba kuyikhaya leqoqo lesibili ngobukhulu laseFrance.
Lapho evakashele noma babuka France qiniseka ungalahlekelwa yini komunye wemizi ngenhla! Njengoba mancane ophithizelayo, ukuhambahambisa kubo kuyoba umsebenzi futhi uzokwazi ukuba ujabulele izici ehlukile lomuzi ngamunye. Into eyodwa le mizi yonke enifana kuyinto nezindawo ezinhle futhi – kunjalo – ukudla emangalisayo, futhi okokugcina ungakhohlwa, eYurophu abantu ukuqeqesha travel nge Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-less-crowded-cities-to-explore-in-france/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)